अब घर–जग्गाको एकीकृत कर बार्षिक १ लाख ७४ हजारसम्म : कति हुनेले कति तिर्नुपर्छ ? [ सूचीसहित ] – UPDATE LINK
काठमाडौ । आज हामी घर–जग्गाको एकीकृत करका बारेमा कुरा गर्छौ ।आजको सामाग्रीमा काठमाडौं महानगरपालिकामा बनेका घर किनिएका जग्गामा कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषय समेट्छौ ।
सोही घर बहालमा दिइएको छ भने बहालवालासँगको सम्झौता अनुसार बहाल कर पनि तिर्नुपर्छ। बहालमा नगए पर्दैन।सम्पत्ति करको दर नगरपालिका अनुसार फरक–फरक तोकिएको हुन्छ। काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र घर–जग्गाको एकीकृत कर बर्सेनि कति तिर्नुपर्छ ?
विभाग प्रमुख अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति कर लगाउँदा चार शीर्षकमा करको दर मूल्यांकन हुन्छ। महानगरले बाटोको प्रकृति हेरी जग्गाको मूल्य तय गरेको छ।जसमा दस लाख रूपैयाँ प्रति आनादेखि पचास लाख प्रति आनासम्म पर्ने जग्गा छन्। यो बजार मूल्यमा आधारित नभई महानगरले निर्धारण गरेको मूल्य हो।
त्यस्तै अर्को हुन्छ घरको बनोट।नयाँ घरहरू आरसिसी र स्टिल संरचनाका हुन्छन्। पुराना घर माटोको जोडाइ साथै काँचो इँटाबाट बनेका हुन्छन्। घरका यस्ता बनोटले नयाँमा भन्दा पुरानो घरमा लाग्ने कर घटाउन सहयोगी हुने अधिकारीले जानकारी दिए।